အောင်မြင့်မြတ်ကတော့ ဥပါယ်တံမျဉ်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးနဲ့ မြန်မာ့ရုပ်ရှင်လောက တစ်ဆစ်ချိုးအပြောင်းအလဲကြီးမှာ ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးမှုကို အပြည့်အဝရရှိလိုက်သူတစ်ဦးပါ။ ခင်ဗျားဆင်းရဲဖူးလား ဆိုတဲ့ ဇာတ်ဝင်ခန်းဒိုင်ယာလော့ခ်တစ်ခုက ပရိသတ်တွေရဲ့ရင်ဘတ်ထဲထိအောင် သရုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တာမို့ အောင်မြင့်မြတ်ပရိသတ်တွေရဲ့ လက်သုံးစကားတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
အောင်မြင့်မြတ်ဟာ အနုပညာလောကထဲကိုရောက်ရှိခဲ့တာကြာပြီဖြစ်ပေမယ့် ဥပါယ်တံမျဉ်က သိန်းစိုးဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ ပရိသတ်တွေကို ပိုလူသိစေခဲ့တာပါ။ အောက်တိုဘာ ၃ ရက်နေ့ညမှာ ရုတ်တရက်ဆုံးပါးသွားခဲ့တဲ့ မင်းသွေးဟာလည်းအောင်မြင့်မြတ်ရဲ့ အနုပညာမောင်နှမလိုတမျိုး၊ သူငယ်ချင်းလိုတမျိုး၊ ဆရာလိုတမျိုး ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အနုပညာနဲ့ပတ်သက်လာရင်တိုင်ပင်စရာဆိုလို့ မင်းသွေးကို အကိုရင်းတစ်ယောက်လို ဆက်ဆံခဲ့တဲ့ အောင်မြင့်မြတ် ခု ချိန်မှာ မင်းသွေးမရှိတော့ ရူးမတတ်ခံစားနေခဲ့ရပါတယ်။
မင်းသွေးပရိုဖိုင်းတွေနဲ့တက်လာတိုင်း မင်းသွေးလို့ ခုချိန်ထိတွေးထင်မှတ်ထားတဲ့ အောင်မြင့်မြတ်တစ်ယောက် မင်းသွေးသူ့ကို စိတ်ခုပြီးစကားမပြောခဲ့တဲ့အချိန်လေးတွေနဲ့အတူ နှစ်ယောက်ပေါင်းပြီး အတူရှိခဲ့တဲ့ အမှတ်တရလေးတွေကို ဝမ်းနည်းစွာရင်ဖွင့်လာခဲ့ပါတယ်။
“ခုချိန်​ထိ ခင်​ဗျား Profile Picture နဲ့ Account ​တွေတက်​လာတိုင်း ခင်​ဗျားပဲလို့ထင်​​နေတုန်း ….အရီးတို့ ဘယ်​​လောက်​​တောင်​ ပူ​လောင်​​နေလိုက်​မလဲဗျာ ….သတင်းကြားကြားချင်း ကျွန်​​တော်​တို့ငိုကြတယ်​ ..တကယ်​​တော့ ခင်​ဗျားကိုချစ်​တဲ့သူ​တွေအကုန်​လုံးငိုကြတာပါ ..အမှတ်​တရ​တွေအများကြီးထဲမှာမှ ကျွန်​​တော့်​မှာရှိတဲ့ မှတ်​တမ်းတင်​ဖြစ်​ထားတာ​လေး​တွေ Album ပြန်​လုပ်​ထားတယ်​ ..ခင်​ဗျားကို သတိရတဲ့သူ​တွေ ဝင်​ကြည့်​​နိုင်​​အောင်​​ပေါ့ .RIP Minthway”
အောင်မြင့်မြတ်လုပ်ပေးထားတဲ့ Album လေးနဲ့ စာလေးနဲ့ကို တွဲပြီးဖတ်ကြည့်ပေးပါနော်။We Love Cele
ကျွန်​​တော်​တို့စ​တွေ့ကြတဲ့ သတ်​ကွင်း​လေ …
​ကြောက်​​ကြောက်​​ကြောက်​ တုန်းက..​ဟျောင့်​ငါ့ကို​သေချာရိုက်​​ပေးကွာတဲ့ … ပုံ​တွေအများကြီးမှာ ဒီတစ်​ပုံပဲ အ​ကောင်းရလိုက်​တယ်​ ….–ိ ​$ သုံးကိုမကျဘူးတဲ့ 🙂
ခင်​ဗျားသီချင်း MTV ရိုက်​ကြ​သေးတယ်​ …
​ဟျောင့်​ ကား​လျောက်​​မောင်းမယ်​ လာခဲ့တဲ့ ..​ဟေ့လူ ဘယ်​​မောင်း​နေတာလဲဆို​တော့ မသိဘူးကွာ ပျင်းလို့ ငြိမ်​ငြိမ်​လိုက်​တဲ့ 😅
​ဟျောင့်​ ငါအကျီမပါဘူး မင်းဟာ​ပေးဝတ်​တဲ့ … အာာာ ​တော်​မလားဗျ ဆို​တော့ မ​တော်​လဲရတယ်​ ကန်​ရဖို့အ​ရေးကြီးတယ်​ဆိုပြီး ကွင်းထဲအတင်း​ပြေးသွား​လေရဲ့ ……
မြန်​မာပွဲသွားကြည့်​တယ်​ ပြန်​လာတိုင်း အဓိပ္ပာယ်​မဲ့တယ်​ကွာဆိုပြီး ဆဲတတ်​​သေးတယ်​ 😅
ဇာတ်​စားကြတယ်​ … ကျွန်​​တော်​က​တော့အမြဲတမ်း ​ဘေးက မုန့်​ပဲလိုက်​စား​နေကြ 😅
သုဝဏ္ဏကွင်းကြီးထဲ​ ကန်​ကြတုန်းက​ပေါ့ …
ဟိုမ​ရောက်​ ဒီမ​ရောက်​​ကောင်​ကို ပထမဆုံး Videoထဲထည့်​ရိုက်​ခဲ့တဲ့သူ …….
သင်္ကြန်​ …. အမှတ်​တရအရှိဆုံးသင်္ကြန်​​ပေါ့ … အဲ့တုန်းက ခင်​ဗျားကျွန်​​တော့်​ကို စကားမ​ပြောပဲ​နေတာ​တော်​​တော်​ကြာတယ်​ဗျ .. မူးပြီးမငိုတာ ​တော်​​တော်​ကြာ​ပေမယ့်​ အဲ့​နေ့က အကြီးအကျယ်​​အော်​​ငို​သေးတာ … ခင်​ဗျားစကားမ​ပြောလို့တဲ့ Hkhkkkk အကုန်​လုံးက ​မင်း မင်း​သွေးကိုကြိုက်​​နေတာလားတဲ့ 😅😅 တကယ်​​တော့ အဲ့ဒီတုန်းက အနုပညာနဲ့ပတ်​သက်​ရင်​ တိုင်​ပင်​စရာ ခင်​ဗျားပဲရှိခဲ့တာပါ .. ကျွန်​​တော့်​အစ်​ကိုလို ဆရာလို ရှိတဲ့ခင်​ဗျားက စိတ်​ခုပြီး စကားမ​ပြော​တော့ အရမ်းခံစားရတယ်​ …
ဆူရှီစားကြတယ်​ .. ဓာတ်​ပုံရိုက်​​တော့ ​နေဦး ငါ့လက်​စွတ်​ကြွားဦးမယ်​တဲ့ 😅😅 ကိုသားညီက နာရီကြွားတာ​ပေါ့ဗျာ
သတ်​ကွင်းမှာ ကျွန်​​တော်​ကြိုက်​တဲ့ Scene …
သတ်​ကွင်းအတွက်​ သီချင်း​ရေးမယ်​ကွာတဲ့ ….ရောက်​သွား​တော့ ခင်​ဗျားသီချင်း​အသစ်​​တွေအများကြီးတီးပြတယ်​ …ခု Second Album ကို​စောင့်​​နေတာ​လေ …
Wanted One Band Show တုန်းက …ခင်​ဗျားကိုရိုက်​ဖူး​ပေးသမျှ​တွေထဲ အကြိုက်​ဆုံးနဲ့ အားအပါဆုံးပုံ​တွေ​ပေါ့ …..
Source-Aung Myint Myat